မြားများ: November 2009
ငါ့ကြောင်ကလေးကို မျက်စိမှိတ် ပြသွားသူ
ငါ့ကြောင်ကလေး တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ ပုခက်လွှဲနေတာ…
ဘာကို ကိုက်ဖဲ့စားသောက်ရမယ်ဆိုတာ ငါ့ကြောင်ကလေး သိရှာ မထင်ဘူး…
အလှမွေးကန်ထဲက ငါးကလေးက မျက်စိမှတ်ပြသွားတော့
ပါးလွှားတဲ့ ကြားခံတခုခုကိုပဲ ငါ့ကြောင်ကလေး ကုတ်ခြစ်ချွေးသိပ်နေခဲ့သလား…..
သူ့ကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူသိမှာ မှတ်လို့ လို့….
ဘာသာစကားက ထ ထအော်တော့..
လောကအဝန်း ရယ်သွမ်းသွေးသံ ဆူညံပွထလို့…
LP ကဗျာဆရာဟာ ဘာသာစကား အမိုက်မှောက်မှာ ချောင်ပိတ်မိလို့….
အတ္တအစိမ်းလိုက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုက်သိမ်းနေရတယ်….
ကြွက်တွေဟာလည်း သူ့အတွက်ဆိုတာ သိခဲ့တာ…
ငါးကြော်ဆို တမျှင်ချင်း စားတယ်…
ကြွက်ခုတ်ရမယ့် သမိုင်းပေးတာဝန်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူး…
သူ့ကိုယ် သူ လျှာနဲ့ ပွတ်သပ်ပြီး
လောကအဝန်းက ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို
ငါ့ကြောင်ကလေး မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်မိတဲ့ နေ့မှာ
သူဟာ သေကွဲ ရှင်ကွဲ အကြောင်းကို ဘယ်တော့မှ ပြောမဆုံးဘူး..
တနေ့မှာ သူဟာ သူ့ဆီကို
အဟောင်းအမြင်း အရိအရွဲကြီး လာရောက် ကပ်ငြိမှာကို တိတ်ဆိတ်စွာ မျှော်လင့်လို့…
ကြောင်အိုပေးမှေး ကိုက်ပါနဲ့လေး ဆိုတာကြီး ခံတွင်းတွေ့နေဆဲ….
ငါ့ကြောင်ကလေးဟာ သူနဲ့ သဟဇာတကို အမြဲ ရှာနေပေမယ့်
သူ့ရဲ့ အတိဇာတကို မေ့လျော့ပစ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး…
ကြွက်ထောင်ချောက်လေးနားမှာ ခြေဆင်းပြီး စောင့်နေဆဲ….
ငါ့ကြောင်ကလေးကို နားလည်တာ ဆိုလို့
သူ့ကို ရေးတဲ့ ကဗျာဆရာရယ် …
ကြွက်ထောင်ချောက်ပေါ်က အသားတစ်ကလေးရယ်ပဲ ရှိခဲ့တာ….
ကဗျာဆရာဟာ သာမန်နှာစေး ချောင်းဆိုနဲ့ တင် … နမိုးနီးယား ဝင်တော့တာပဲ…
ကြွက်တွေ ထောင်ချောက်ကို မတိုးတာလည်း…တော်တော် ခက်တယ်….
ငါ့ကြောင်ကလေးဟာ အမြဲတမ်း သမ်းဝေနေတော့တာပဲ…….
Anthologies ကဗျာပေါင်းချုပ်၊ Textbooks ကျောင်းသုံးစာအ်ုပတွေကတဆင့် ကဗျာဖတ်သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ကဗျာတွေဟာ သူတို့နဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးတဲ့ ရေပန်းစားမှုရဲ့ အရသာများကြောင့် လက်ခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြား ကဗျာတွေကို complexity ခက်ခဲ နက်နဲမှု၊ difficulty ခက်ခဲမှု၊ impenetrable strangeness ပိတ်ဆီးနေသော ထူးဆန်းမှု (စိမ်းမှု) တချို့ကြောင့် ကဗျာဖတ်သူတွေဟာ လက်မခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူသိများပြီး ကောင်းစွာ အသုံးပြုတဲ့ ကဗျာတွေဟာ အခြားကဗျာတွေထက် အကြွင်းမဲ့ လုံးဝ ပိုကောင်းဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဝေဖန်သူတွေအား ၄င်းကဗျာတွေရဲ့ အကြွင်းမဲ့ အပြည့်အဝ တန်ဖိုးတွေကို ရွေးထုတ်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်က ညံ့တဲ့ ကဗျာတွေကို ဆန်ခါတင် ရွေးဖယ်ပါတယ်။ သေချာတဲ့ timeless quality အချိန်မရွေး ထာဝရ အရည်အသွေး ရှိသော ကဗျာများထဲမှာ အမှန်တရားက ဖြစ်နိုင်ချေ အနည်းဆုံးပါပဲ။ ဒါက နှိုင်းရ သဘောပါပဲ။ ကျွန်တော်က poetry ကဗျာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရာတိုင်းဟာ absolute လုံးဝ အကြွင်းမဲ့သဘောထက် relative နှိုင်းရသဘောဖြစ်တာကို ပိုကြိုက်တယ်။ Coleridge ကိုးလရစ်ရဲ့ relativist statement တခုဖြစ်တဲ့ Poetry ကဗျာက Pleasure စိတ်ကြည်နူးမှု အများဆုံးကို အပြည့်အဝ နားလည်တဲ့ အချိန်မှာ မပေးဘဲ ယေဘုယျ ဆန်တဲ့ အချိန်မှာ ပေးတယ်။ ဆိုတဲ့ ကဗျာ statement က Poetry နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမှန်ကန်ဆုံးတွေထဲက တခုအဖြစ် ကျွန်တော့်အား နှစ်သက်စေခဲ့ပါတယ်။
Poetry မှာ အချိန်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပုစ္ဆာက ကျွန်တော့်ကို အမြဲ ဆွဲဆောင်ထားတယ်။ ကဗျာဆရာ တယောက်က သူ့ရဲ့ အချိန်ကာလ(ခေတ်ကာလ)နဲ့ အတူတူ ရှိနေတာလား။ ဒါမှ မဟုတ် အဲဒီ အချိန်ကာလကို ကျော်လွန်သွားတာလား။ အတော်ဆုံးကဗျာဆရာတောင်မှ ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်လောက်ပဲ အရာရောက်တယ်။ ကဗျာဆရာတယောက်ဟာ ဆယ်စုနှစ် တခု နှစ်ခုလောက် အရာရောက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာ တယောက်ဟာ ယခုအချိန်မှာ ဖမ်းဆွဲထားတဲ့ time-spirit (ကဗျာဖတ်သူအပေါ် သြဇာ လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ အချိန်ကာလ)နဲ့ဆိုင်တဲ့ စိတ်ကူးအယူအဆ၊ ပြီးတော့ အချိန်ကို လွန်မြောက်ပြီး သူ့ရဲ့ truth အမှန်တရားကို လောကကြီးကို ထူးထူးခြားခြား ဆန်းဆန်း ပြားပြား ပေးတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူး အယူအဆ တခု ကျွန်တော့်မှာ ရှိတယ်။ time-spirit အသီးသီးဟာ တခုနဲ့ တခု မတူနိုင်ဘူး။ twenties(၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ)ဟာ thirties (၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ)နဲ့ ခြားတားတယ်။ အလားတူ thirties နဲ့ forties နဲ့ မတူဘူး.။ပြီးတော့ ကဗျာဆရာတယောက်ဟာ Hopkins ဟော့ပ်ကင်းလို ရှေ့ဖြစ်တွေကို ဈာန်ဝင်စားကောင်း ဝင်စားမယ်.၊။
ကဗျာဆရာတယောက်ဟာ ဆယ်စုနှစ် တခုရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ကြည့်ဖို့ အဲဒီအချိန် ကျော်လွန်ပြီး နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ(စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ နှစ်များမှာ နေထိုင်ပြီး contemporary events ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်(ခေတ်အလိုက် ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်)တွေကို ရေးသားတဲ့ ကဗျာဆရာတွေဟာ အဲဒီ လက်ငင်းအချိန်တွေကို ကျော်လွန်သွားတဲ့ realities အရှိတရားတွေကို ရေးတဲ့ ကဗျာဆရာတွေလောက် မသွားဘူး။ ကဗျာဆရာတွေဟာ reality အရှိတရားတွေနဲ့ အားထုတ်နေခဲ့ကြတယ.်.။ ခုထိတော့ အချိန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အလေးထားစရာ ကိစ္စတွေကို ကျော်လွန်သွားတဲ့ reality အရှိတရားတခု ပါနေတဲ့ ကဗျာတွေကသာ (survive) ဆက်လက် ရှင်သန်နေခဲ့တယ်။ ဒီဆက်လက် ရှင်သန်နေတဲ့ ကဗျာတွေမှာ timeless (အချိန်မရွေး၊ထာဝရ)နဲ့ ပတ်သတ်တာ တခုခု ပါရမယ်။ Timeless ကိုယ်တိုင်က relative term နှိုင်းရ အချိန်ကာလ သက်သက်ပဲ။ ကဗျာတပုဒ် နှစ်ပေါင်း သုံးရာ ဒါမှ မဟုတ် လေးရာလောက် ခံရင် timeless လို့ ခေါ်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ်။ အတိအကျတော့ မဟုတ်ပါဘူး.။ ရှိတ်စပီးယားရဲ့ ဆွန်းနက် ကဗျာတွေကို timeless အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားပါတယ်။ ဆယ်နှစ်ကြာသွားပြီးနောက် မေ့သွားတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ထက် အနှစ်သုံးဆယ်ကြာ ဖတ်တဲ့ ကဗျာတပုဒ်က timeless နဲ့ ပိုပြီး နီးစပ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကဗျာတွေကို ဆက်လက် ရှင်သန်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ အရာတွေ အဲဒီလို ရှင်သန်ဖို့ ကဗျာတွေက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အသွေးတွေဟာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေနေတဲ့ ဝေဖန်ရေး သမားတွေ အတွက် အနက်ရှိူင်းဆုံး စိတ်ဝင်စားစရာ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Poetry ကဗျာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အနက်ရှိူင်းဆုံး အရာတွေဟာ ယုတ္တိရှိတယ်လို့ ခုထိ ကျွန်တော် မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာ အမြင်ထဲမှာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု မရှိတဲ့ သဘောထားအမြင်နဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထည့်ပြောမယ်။ Potery ကဗျာဆိုတာ reality အရှိတရားပါပဲတဲ့။ being ဖြစ်တည်မှု တခုလုံးနဲ့ confrontation ထိပ်တိုက်တွေ့မှု တရပ် ဖြစ်တယ်။ Poetry ကဗျာဆိုတာ life ဘဝ(နေထိုင်မှု)နားလည် သဘောပေါက်ဖို့ soul စိတ်ရင်း၊ mind စိတ်၊ body ခန္ဓာကိုယ်တို့ရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ အပြင်းအထန် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှု ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ကဗျာဆိုတာ လူ့ဘဝရဲ့ chaos ပရမ်းပတာ ဖြစ်မှု အတွက် ဒါမှ မဟုတ် phenomena သဘာဝ လူ့လောကရဲ့ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရပ်များကို စီစဉ်ရေးသားတာ ဖြစ်တယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ ကဗျာ အယူအဆနဲ့အမြင်တွေဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံသာ ခေတ်ပေါ် ကဗျာဆရာ Richard Eberhart ရဲ့ အယူအဆတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာတွေ တယောက်နဲ့ တယောက် ကဗျာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အယူအဆ ရေးရာတွေမှာ တူတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ မတူတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကဗျာဆရာတွေဟာ လွတ်လပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ရေးခွင့် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လမ်းကြောင်း ကိုယ်ဖောက်ပြီး ကိုယ့် သမိုင်းကိုယ် ရေးနိုင်ရပါမယ်။ တကယ်တော့ မိမိတို့ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ကဗျာဆရာ တယောက် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ကဗျာ (အနုပညာ)ဟာ နိုင်ငံတကာက အခြား ကဗျာဆရာများက ဖန်တီးတဲ့ ကဗျာတွေနဲ့ တန်ဖိုး အတူတူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးပုံ ဖန်တီးနည်းတော့ တူချင်မှ တူပါလိမ့်မယ်။ ဖန်တီးတဲ့ ပုံသဏ္ဏာန်ကလည်း ထပ်တူ ကျချင်မှ ကျပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့ ကဗျာဟာ ဘယ်ကဗျာဆရာရဲ့ အရိပ်မှ မကျလေ ကောင်းလေပါပဲ…။ ။